I-Bear Mountain Getaway - I-Airbnb
I-Bear Mountain Getaway
Aspers, Pennsylvania, United States
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguLuann
Ikhabhathi yasentabeni ehleli kwi-2 1/2 yeehektare zamaplanga abucala. Ukuhlehla okuzolileyo kakhulu kunye noxolo kunye nombono omhle wemithi yeentaba. Ikhitshi elitsha elihlaziyiweyo, igumbi lokutyela, amagumbi amabini okulala, igumbi lokuhlambela elineshawa, i-landline, i-WIFI. Ukonwabela imbonakalo entle kwindawo yedesika kunye nomgodi ongaphandle womlilo. Indlela ayilungiswanga kodwa igcinwe kakuhle. Kufuphi neMbali yeGettysburg yeSizwe yeDabi, ukukhwela intaba kunye nokuloba. Ndivumela isilo-qabane esingaphantsi kwe-30 lbs. ngomrhumo we $20 ngobusuku. Oku kufuneka kuhlawulwe xa ubhukisha.
Nokuba ufuna indawo yokuzimela epholileyo phakathi kweenduli ezinemithi okanye isiseko sekhaya lophononongo lwangaphandle, iBear Mountain Getaway ubufuna ukuba yiyo.
Ikhabhinethi inamagumbi amabini okulala, iibhedi ezimbini. Indawo yokutyela ekhitshini ixhotyiswe ngokupheleleyo kwaye ivuleleke kwigumbi lokuhlala kunye ne-TV eyi-intshi engama-40 yesikrini esisicaba esineziteshi zesathelayithi, i-HBO, i-Star's kunye ne-DVD player eneemuvi. Kukho iveranda enkulu enegrill kunye neendawo zokuhlala ezininzi ezinefen yesilingi ukuze uhlale upholile. Uya kuba nethuba lokubona ixhama elihlala emahlathini.
Nje ukuba uphumle kwaye utshajwe ngokutsha, qalisa ukuphonononga. Ngokudlala igalufa, ukukhwela intaba, ukuqubha, ukuloba, ukubukela iintaka, ukuphonononga imbali yaseGettysburg. Kukho iipaki ezimbini zikarhulumente kufutshane neCaledonia State Park kunye nePine Grove Furnace. Kukho amachibi amabini eentaba iLaurel kunye neFuller Lake, ukukhwela intaba kwi-Appalachian Trail okanye ukukhwela ibhayisekile kumzila kaloliwe. Yonwabela igalufa kwiKhosi yeGalufa yasePines Apple.
Awuyi kuphelelwa ziindlela zokuthoba indawo yakho yasendle kunye nemangalisayo.
4.91 · Izimvo eziyi-130
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi130
Uya kuhlala kwindawo enemithi eyi-2 1/2. Kuthe cwaka kakhulu kwaye kuza kubona amaxhama ngokuhlwa.
Umbuki zindwendwe ngu- Luann
Ndizobe ndikunika ispace sakho kwaye andizuba seGetaway ndikubulise. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye iinkxalabo nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nam.